Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Harry Potter bhanya na manqaku ezininzi umboniso ngempumelelo lonke ixesha. Uninzi lweziqendu ezivela kwiifilimu zikaHarry Potter zadutyulwa ngaphakathi kweLondon uqobo. Nokuba ungumntu okhutheleyo wefilimu kaHarry Potter okanye uthotho lwencwadi, ILondon yeyona ilungileyo…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Xa kuziwa ukutyelela iingqukuva eYurophu edume, London ngokungathandabuzekiyo phezulu kuluhlu wish zonke babakhenkethi kwaye kukho Izinto ezininzi To Do eLondon. Imelwe elide, zinembali enika umdla; yezinto ezintle izinto; kwaye kukho izinto ezininzi…